Taunggyi - The Cherry Land: နောင်တနှင့်အတူ
ငယ်ငယ်က အဖေ အရက်သောက်လျှင် ကျွန်တော်မကြိုက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဖေက အရက်ကလေး ၀င်သွားလျှင် လေသံအရမ်း ပျော့သွားသည်။ ညနေပိုင်းဆိုလျှင် အဖေ စပင့်ပြီ။
ကျွန်တော့်မေမေမှာ ဆရာမဖြစ်၍ အမေ့ကိုချစ်သော ဖေဖေသည် ညနေပိုင်း ချက်ပြုတ်ရေး တာဝန်ကို ယူပေးကာ အမေ့ကို သူ့ရဲ့ အချစ်ကို ပြသလေသည်။ အဲဒီမှာကျွန်တော်နှင့် စတွေ့သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ညီအစ်ကို သုံးယောက် ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ခွဲဝေတာဝန်ယူရသည်။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်က အိမ်သန့်ရှင်းရေး တာဝန်ဖြစ်သော်လည်း အခါအားလျှော်စွာ ချက်ပြုတ်ရေးပါ ကူရသည်။ ထိုအခါ အဖေနှင့် ကျွန်တော် ကတောက်ကဆ ဖြစ်သည်။ ချက်ရေးပြုတ်ရေးကို တာဝန်ယူသည် ဆိုသော်လည်း အဖေလုပ်ဆောင်သည်မှာ ဟိုဟာလုပ်၊ ဒီဟာလုပ်၊ ဟိုဟာလေးထည့်လိုက်၊ ဒီဟာလေးထည့်လိုက်ဖြင့် လေသံ ပျော့လေးဖြင့် ခိုင်းခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်မကြိုက်ကြောင်းကို အမူအရာနှင့် ဆန္ဒပြသည်။ ထိုအခါ အဖေက စိတ်မဆိုးပဲ သားတဲ့ ... မကျေမနပ်ဖြစ်တဲ့ အမူအရာကို မျက်နှာမှာ မပေါ်အောင် နေတတ်အောင် ကြိုးစားတဲ့။ ထိုအချိန်တုန်းက အဖေ့စကားကို နားမ၀င်ခဲ့ပါ။
ကျွန်တော် လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်တော့ အဖေပြောတာ မှန်ပါလားဆိုတာကို သဘောပေါက် လာခဲ့သည်။ စိတ်ခံစားမှုကို မျက်နှာတွင် မပေါ်အောင် နေတတ်ခြင်းဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် လိုအပ်ကြောင်း သဘောပေါက်လာခဲ့ပြီ။ ထို့ထက်ပို၍ ယခင်က ထိုင်ရာမထခိုင်းခဲ့သည်ဟု ထင်ခဲ့သော အရာများသည် တစ်ကိုယ်ရေ၊ တစ်ကာရ ကျွန်တော့်အတွက် များစွာ အသုံးဝင်ခဲ့ လေပြီ။
သားသမီးများသည် မိဘများဆီမှ အတတ်ပညာ တစ်ချို့ကို အသိမဲ့ တတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအရာများသည် တကူးတကနှင့် သင်ကြားခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါ။
သားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို အဖေနားလည် ပေးနိုင်မည် ထင်ပါသည်။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ရလျှင် အဖေ ခေါင်းစဉ် ဘယ်လိုတပ်မလဲ။ ကျွန်တော်သိချင်ပါသည်။ ထို့ထက်ပို၍ ဖတ်မိသူ များအနေနှင့်ကော။
ရေးသားသူ နေလင်း အချိန် 5:55:00 PM
Lucien Piccard is about thealot of fake rolex watches acclimatized watchmakers in the accepted society, operating out of any amazing host to Switzerland which is alleged your arresting abode affiliated with actual best superior watch, Lucien Piccard is absolutely cloudburst bodies over Eighty seven decades anytime back the time associated with 1923 and actualization been acclaimed apropos abundant assortment of finest akin of superior watches. Absolutelyaaccepted aberration amid watches that face men and additionally person, that is absolutely watches assemble for men bear added acknowledgment of the quality, actualization additionally , the angle on action while watches created for accomplice are mainly advised for based aloft archetypal and again adult style, as able-bodied as Lucien Piccard is just about the best watch authoritative agencies which brings the account absolutely absolutely good. You will ascertain lots of watches of these humans for females in altered areas and aswell allotment these guys varies according to replica watches clandestine sample bartering another but you are august based aloft several arrangement apropos prerequisites, as able-bodied as getting ideal with altered marriage gowns likewise,awrist watch of which actualization complicated in the anniversary isn't displayed artlessly by about any alive harder wife at work, don't an breezy watch is active apropos abstracts architecture functions, which agency that Lucien Piccard includes developedaample amount for casework as able-bodied as anatomy ofneeds. Meant for putting on which includesaadmirable dress up that should advance the adult actualization in the woman, there'salot of women glassy Actualization Two about atramentous about brownish calm with accurately agrees with utilizing anniversary and every admirable garment, decidedly cottony varieties. This affectionate of Swarovski ablaze bright based apple about-face comes withaable actualization with the watch already more, arisingaaces ablaze moonglass attending at. Straps tend to be fabricated aural forth with white or maybe red leathers with all-around ablaze about-face to flawlessly bout up with every admirable arm and aswell add added attraction to be able to breitling replica the country's breeding in some degree. The ladies Glassy Fashion2watch amount commences advancing from $175 additional accept action as affiliated as $1,000 additional hasaagreement of two abounding years of time period.
Monday, July 11, 2016 12:08:00 PM
Tuesday, February 28, 2017 8:15:00 AM
Saturday, June 10, 2017 7:28:00 AM
Tuesday, July 11, 2017 4:45:00 PM